Waamichaa Uumata Oromoof !!!
Waamicha ummata Manasibu, Qilxu Kaarraa, Najjoo, Jarsoo, Baabboo, Begii, Gidamii, Gimbi, Nekemte fi Uumataa Oromoo Maraafi Nu dabarsa?
Amma polisin gumuzi mandi Mana Bank seente akka hin baneef uumati marsee qabee jira. Gara Galgala kana Policen Feederala Poice Gumuzi ajabee ummataa irra dhorkee Bank Manditi Basuun gegese jira. Gumuzu qoofa utuu hin tanee diini Oromoo Mandi akka seene akka hin bane Ummani Murtefatee jira. Police Feederala Reefa Oromoo Barta haraka fudhee Oromoo akka owalatuu goochuu mana Oromoo sosodachisuu egalee jira. Kun amoo TPLF ummata Oromoo waliin lola isaa dhuma keessa galti jeedhamee jira. Ummani Mandi TPLF akka Manddi hin seene kan falmuu egalee guyya gafa durati egaleeti, Hata’uu malee ABOn waarani TPLf Mandi akka seenuu dirqisisun isaa uumatii haraa gadaan dubacha jira. Garbuman keenya kan nuf malata’ee gafaa warana TPLF gadi hadarbuu jeedhe ABO murteese jeedhan jiru.
Oromo Irrati Kara ba’aa Harage, Kara Lixa Moyalee, Kara Afari Karayuu irrati, Baha’a Walegga Goocha rawatamee fi Manasibuu keessati Murmi Muramuu duba Mootuumatuu duba jira jeedhi. Erga mootummaan Oromiyya ta’ee Mootumman Federala Mirga keenya egsisuu didee, reefii Oromoo hin awalamiin hafee tarakanfi mata keenya fudhachuuf dirqaman. Kana Booda sanyi diina naannoo keenya seene naggan galuu hin qabuu, Meesha yoo nu haraka fudhatan ilee Abdan gubnee summi nyachifnee diina of irra eguuf dirqamna
TPLF Kara Hunda Uummataa Oromoo irra dula sanyii baleesu irratti raawataa jira. Oromoon cisee du’uu hin qabuu. Ji’aa kana keessa TPLF Milishiyaa Somalia hidhachisee uummataa Harargee ficisisun isaa ni yadatama. Oromoon bakka jiruu caalisee irratti dhageefacha ture, Oromoon akka uummataa Harargeef dirmatuu iyataa keenya irratti ni califtan. Amoo akkumma kanan dura godhan Gumuzin Hidhachisan Oromoo ficisisaa jiru.
Gummuz Oromoo 15 Morma kutee Bishan keessa busun ajjeftee jirti. Kan immoo bakka buuten isaan hin beekamnee Oromoon Gunfi, Badeessa fi Odaa jiru hundi lubun isaa ba'aa jira. Ergaa Walii dabarsa. Diini karaa Oromiyya irra darbuu dhabachuu qaba. Barta bakka Fadun fi Fardosi jeedhamuti Oromoo 11 qalani bishan keessati gatan jiru, Gunfi fi Badeessati amoo Oromoo 4 ajeefamani jiru. Oromoon bakka buteen isaa dhabamee da'iiman dabaltee heeduu ta'uu isaan ibsame jira.
Tplf'n saba gumuz uummata manasibuu irratti duula bansiisee jiruun lammii Oromoo nama 12 ajjeesisee jira. Bara 2000 's tplf uummata gumuzii fi bartaa uummata oromoo irratti duulsisuun lubbuu namoota hedduu akka galaafatee fi qabeenyaa hedduu akka saamsise ni yaadatama. Akkasumas bara 2000 magaala Naqamtee buufaata konkolaataa keessatti dargaggoonni magaalaa Naqamtee gumuzii irratti lola yemmuu banan poolisiin federaalaa barataa waggaa 3 ffaa barnoota fayyaa baratu rasaasaan rukutanii ajjeesan. Walumaagalatti gumuzi fi bartaan yeroo addaa addaatti gocha suukanneessaa uummata manasibuufi naannoo ishee jiraatan irratti yeroo addaa addaa itti tarkaanfii lola ummameen saba keenya galaafachaa jirtti. Kanaafuu yemmu Tigiren Gumuziin hidhachiftee uummata keenya qaltuu hanga yoomiitti teenyee ilaalla? Yaa dargaggoo manasibuu,qilxukaarraa fi naannoo ishee qalamuun obboleessa,obboleetti, jaarsaa fi jaartii nutti haa dhaga'amu,nuti kan jaldeessa kana irratti duullee of irraa hin kunne,gumaa lammii keenyaa yoo hin baasane,eenyutu nuuf baasa? ,osoo lammiin keenya qalamuu akkamittiin rafna? dargaggoo, jaartii fi ijoollee osoo hin hafin kaanee gumaa dhiiga keenyaa haa baasnu, meeshaa qabnu qabannee haa kaanu.
Borii kassee yeroo waliiraa hin cinnef Magaalaa Mandi keessatti Uummani kara irratti ba’uun hirira nagaa goochuun konkolata wara Gumuzii akka gadii hindabaree Goochuu mormii isaa dhageesifachuuf deema, Ummani Suuqii isaa cufee Mana isaa hunda Cufee Karatti ba’ee ta'uun mormmii isaa ibsata.
Yaakaa fi dugugaa sanyii Oromoo irrati raawatama jiruu hunda Tigiretuu ittigafatama Tigiroon Oromiyaa Keessa ta'aan yaaka dalagan Oromiyaa keessa ba'uu qabu.
Maggalan Oromiyaa hundi Nu dirmadha diina Kara irra hin dabarsiina??